ဝန်ကြီးရူး ရူးနေသည့် တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ တိုက်ခိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အမည်စာရင်း ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးအဖြစ်မှ အမည်စာရင်းရုပ်သိမ်းခံရသူ ဦးအောင်ကျော်မိုး ပြန်လည် တုံ့ပြန် - Open Hluttaw
ဝန်ကြီးရူး ရူးနေသည့် တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ တိုက်ခိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အမည်စာရင်း ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးအဖြစ်မှ အမည်စာရင်းရုပ်သိမ်းခံရသူ ဦးအောင်ကျော်မိုး ပြန်လည် တုံ့ပြန်
Posted on ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 28, 2018 by
ဝန်ကြီးရူး ရူးနေသည့် တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ တိုက်ခိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အမည်စာရင်း ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးအဖြစ်မှ အမည်စာရင်းရုပ်သိမ်းခံရသူ ဦးအောင်ကျော်မိုးက ပြောကြားသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်က ကျင်းပသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အရေးပေါ် အစည်းအဝေးတွင် မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ၎င်းတင်သွင်းခဲ့သည့် ဝန်ကြီးနှစ်ဦး အမည်စာရင်းကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကလည်း ကန့်ကွက်လွှာများကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
This entry was posted in လွှတ်တော်သတင်းများ, တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော်, Uncategorized. Bookmark the permalink.
← ရန်ကုန် စည်ပင် ဥပဒေကြမ်းကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲသူများ စိတ်ပျက်
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်၏မေးခွန်းဥပဒေနှင့် မညီသောကြောင့် ပယ်ချ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ရှင်းလင်း →